रातो टिका निधारमा नगरेर जसिताले गल्ती गरिन् ? « Mazzako Online
रातो टिका निधारमा नगरेर जसिताले गल्ती गरिन् ?
लभ स्टेशन फिल्म रिलिज भन्दा अघि नै अभिनेत्री जसिता गुरुङलाई निर्देशक अशोक शर्माले रातो टिका निधारमा फिल्मका लागि अफर गरेका थिए । यो फिल्ममा जसिता र अशोकविच पारिश्रमिकको कुरा नमिलेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
जसिताले १० लाख मागेको तर अशोक ८ लाखसम्म दिन तयार भएको भन्ने खबर आएको थियो । तर, यो फिल्ममा जसिताले काम नगरेपछि अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले काम गरिन् त्यो भने १६ लाख पारिश्रमिक लिएर । रातो टिका निधारमामा साम्राज्ञीले काम गर्ने फाइनल भएपछि लभ स्टेशन रिलिज भयो ।
तर, फिल्म असफल मात्र भएन चोरीको आरोप खेप्न पनि वाध्य भयो । चोरीको आरोप खेपेको फिल्मले जसितालाई कुनै पनि प्लस गरेन । जसिता अब कुन फिल्म गर्ने भन्ने दोधारमा छिन् । अहिले जसिताले रातो टिका निधारमा सिनेमा नगरेर गल्ती गरेको भन्ने खालका टिप्पणी भैरहेको छन् ।